Sawir sidee ayaa laga dheehan karaa shaqa-ka-fariisadka macalin Van Gaal?! | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Sawir sidee ayaa laga dheehan karaa shaqa-ka-fariisadka macalin Van Gaal?!
Sawir sidee ayaa laga dheehan karaa shaqa-ka-fariisadka macalin Van Gaal?!
Muqdisho – Tababarihii hore ee kooxaha Man United, Barcelona iyo Bayern Munich, Luis Van Gaal ayaa ugu danbeyn ku dhawaaqay inuu iskaga fariistay shaqadiisa macalinnimo ee kubadda cagta.
65-jirkan ayaa ka maareeye ahaan, waayo fiican kusoo qaatay shaqadiisa isaga oo soo leyliyay kooxo waaweyn oo ka dhisan England, Jarmalka, Spain iyo Holland.
“Sanadkii hore waxaan sheegay inaan ka fariisanayo shaqada tababarenimo, balse waan rogay go’aankayga waxaana is iri usii kaadi in kale,” Van Gaal ayaa u sheegay warfidiyeenka Holland kadib markii dowladda Netherland ay guddoonsiisay abaalgudka Waqti-nololeedka habeenkii Isniinta.
“Hadda laakiin waa toogtaydii danbe kama laabanayo go’aankayga. Maqnaanshiyahayga badan wuxuu sabab ka noqday ogaal la’aanta marxaladaha ay ku sugan yihiin qoyskayga.”
Van Gaal ayaa hadalkan soo hadal-qaaday kadib dhimashada wiilka uu sodogga u ahaa kaas oo geeriyooday dhawaantan intuusan ka tagin shaqada kooxda United-ka oo lagu badalay Jose Mourinho kahor intuusan kooxda keenin bar dhamaadka FA Cup.
Kadib ciyaaristiisa fariidnimada laheyd, Van Gaal wuxuu ugu horreyn tababare u noqday kooxda Ajax sanadkii 1992.
Wuxuu Ajax kula guuleystay horyaalka dalkaasi sanadihii 1994, 1995 iyo 1996 – isaga oo sidoo kale la ruxay kooxda koobka Champion League.
Gaal ayaa yimid Barcelona sanadkii 1997 isaga oo koobab uu kamid yahay Copa del Rey crown iyo UEFA Super Cup la qaaday.
Wuxuu markiisii ugu horreysay soo galay leylinta ciyaaraha qaran ee xulka Holland sanadkii 2000 hayeeshe wuxuu ku dhacay inuu tiigsado koobkii adduunka ee ka dhacay Korea-Japan sanadkii 2002.
Van Gaal ayaa sidoo kale kooxda Bayern Munich sanadkiisii ugu horreeyey keenay bar dhamaadka koobka Champion League iyo isaga oo la qaaday koobab kamid ah Bundusliga Jarmalka.
Leylintii labaad ee qaranka Holland ayaa la timid bandhig fiican kadib markii sanadka 2014 uu xulka soo gaarsiisay afar dhamaadka koobka adduunka ee ka dhacay Brazil.
Gaal ayaa shaqadiisa kusoo af-meeray laba sano oo uu la joogay naadiga Shayaadiinta Cascas lagu naaneyso ee Man United – hayeeshe wuxuu ku dhacay inuu kooxda meel sare gaarsiiyo. Waxaana booskiisa lagu badalay ninka gacan-yarihiisa ahaa xilligii Barcelona uu tababaraha u ahaa ee Jose Mourinho – walow Van uu kooxda kula guuleystay koobka FA Cup.
Previous: Haweeney 8 sano ku dhex nool gegi dayuuradeed
Next: Mustafi oo sheegay sababtii uu ku yimid Emirates